Nhau - Guowang Inoburitsa T1060B, otomatiki Kufa-Kucheka Muchina neBlanking KuChina Dhinda 2017
Guowang Inoburitsa T1060B, Otomatiki Die-Kucheka Muchina Uine Blanking KuChina Dhinda 2017
KuBeijing Printing Exhibition muna Chivabvu 10, 2017, sekambani inotungamira mumunda we post-press muChina, Guowang Machinery Group (inozonzi Guowang) yakaunza akasiyana siyana akachenesa otomatiki kufa-yekucheka michina uye mapepa ekucheka ku chiratidziro. Nekutarisisa.
Kubva pakagadzwa muna1993, Guowang Boka rakazvipira kutsvagisa nekusimudzira uye kugadzirwa kwehunyanzvi uye zvigadzirwa, zvakanyatso kusanganisa matekinoroji epamberi kubva kuGerman neJapan kuti vagadzire chizvarwa chitsva chemaotation uye akangwara epamusoro-magumo zvigadzirwa. Muna 2013, Guowang neGerman Baumann Group zvakabatana zvakasimbisa Wallenberg Guowang (Shanghai) Machinery Co, Ltd. Vachitaura nezve zvikonzero zvekushandira pamwe, Sachigaro Lin Guoping akataura kuti Guowang haina kungobudirira kupinda mumusika wepamusoro-kumagumo post-kudhinda. , asi zvakare akafamba pamberi peiyo indasitiri maererano nekushandira vatengi vekumusoro-soro. Tine chivimbo chekuti tinokwanisa kushandira vatengi vekumusoro-soro kumba nekune dzimwe nyika nemitengo ine mwero kuburikidza nechiratidzo chaWallenberg, manejimendi, uye nehunyanzvi hwekuita. Panguva imwecheteyo, zvigadzirwa zveGuowang pachazvo zvicharamba zvichitarisa pakati-kusvika-pakakwirira-kumagumo misika yevatengi kumba nekune dzimwe nyika. Iyo kambani inoronga kutora maviri-maraki zano kuti pakupedzisira ibudirire yakazara kufukidzwa pamusika.
Uye zvakare, Guowang haina kujeka padanho rekusimudzira kwevatengi mumusika wepamusoro. Izvi zvinogona kuonekwa kubva kuGuowang achishingairira kuenda kunze kwenyika uye kuenderera mberi kuwedzera mumisika yekukunze. Parizvino, Guowang inotarisa pakuwedzera kwemisika yemhiri kwemakungwa muEurope neUnited States. Muna 2007, Guowang akapinda zviri pamutemo mumisika yeEuropean neAmerica. Mumakore gumi, bhizinesi rayo rekumhiri kwemakungwa rakaverenga 25% kusvika 30% yebhizinesi rayo rese, uye mhedzisiro yacho inoshamisa.
K137A yakakwira-yekumhanyisa kubvisa uye yekucheka system
"China hapana mubvunzo kuti musika mukuru weGuowang. Mune ino nharaunda, kana kambani ikasatarisa pamusika weChina, inozotadza." Lin Guoping anotenda kuti kunyangwe China iri inorema nyika yeindasitiri, ine hungwaru uye girini. Pfungwa yekusimudzira yakadzika midzi mumoyo yevanhu, uye indasitiri yekuChina yekudhinda nekurongedza iri kushandura kushandura nekuvandudza izvi.
T1060B Otomatiki diecutter ine kuvhara
Paratidziro iyi, vateereri vazhinji vakamira neT1060B otomatiki kufa-yekucheka muchina weGuowang Complete Waste Removal. Chizvarwa chitsva T1060B ine brand-nyowani tekinoroji uye system, uye kwakakwana kupfekenura kune mashandiro maviri seti ekukurura uye otomatiki kupatsanurwa kwemapepanhau. Kunyangwe marongero ekudhinda uye substrate yakashandiswa, iyo tsvina inogona kunyatso kubviswa pakumhanya kwakanyanya uye zvigadzirwa zvakapedziswa zvinogona kupatsanurwa zvakanaka. Iyo yekurasa marara furemu inotora pneumatic kumusoro uye pasi kusimudza basa, uye tsvina kubvisa furemu ine yakajairwa inokurumidza kukiya mudziyo uye yepakati pekumisikidza basa, izvo zvinogona kuita kugadzirira kwembeu yehuswa nekukurumidza uye nyore. Nemhando yepamusoro, kudhura kwekuita uye yakaderera mari yekudyara, mhando iyi yemuchina michina inogona pasina mubvunzo kubatsira mabhizinesi kuvandudza mamwe mabhenefiti.
T106Q Otomatiki Kufacutter nekubvisa
C106Y otomatiki inopisa foil stamping muchina
Uye zvakare, T1060Q kubvisa otomatiki kufa yekucheka muchina uye C1060Y otomatiki bronzing firimu yekucheka muchina vanobvunzawo. "Kutsvaga hunhu hweGerman neJapan uye kuumba zvigadzirwa zvemunyika", Lin Guoping akataura kuti kunyangwe makwikwi mundima iyi ari anotyisa, musika wepaketi une mukana wakakura. Chero bedzi kambani inogara ichitevedzera kutsvaga kwemhando uye mhando, uye ichipa mhando yeGerman pamitengo yeChinese, kambani ichaita musiyano. Ndiyo nzira yako pachako.